Norahonana indray ilay bilaogera Ejipsiana Monem · Global Voices teny Malagasy
Norahonana indray ilay bilaogera Ejipsiana Monem
Voadika ny 07 Janoary 2019 2:37 GMT
“Miatrika fandrahonana higadra indray” ilay bilaogera Ejipsiana sady mpanao gazety Abdel Monem Mahmoud izay navotsotra tamin'ny volana Jiona 2007 rehefa avy nigadra 46 andro tao amin'ny fonjan'i Torah, atsimon'i Cairo. Izao fandrahonana indroa misesy izao dia samy fanadiovana ataon'ny fanjakana hanesorana ireo mpikatroka ara-politika sy noho ny fitateram-baovao ny fampijaliana, “hoy i Nora Younis nanoratra.
Tao amin'ny lahatsoratra bilaogy navoaka androany, nanoratra i Monem fa ninkononkonona fanentanana manohitra azy sy nandrindra ny fisamborana azy indray ny manampahefana Atef el-Hosseiny – izay nampijaly azy nandritra ny 13 andro tao amin'ny foiben'ny fiarovana ny tanànan'i Nasr tamin'ny taona 2003, niaraka tamin'i Ahmed Moussa, mpanao gazety ao amin'ny al-Ahram akaiky ny sampan-draharaham-piarovana.
Araka ny voalazan'i Monem, namoaka vaovao azo avy tamin'ny tatitry ny polisy ilay mpanao gazety al-Ahram, vaovao izay toa nomen'i el-Hosseiny. Miampanga ilay bilaogera Monem ho solontenan'ny Mpirahalahy Miozolomana niditra an-tsokosoko tao amin'ny gazety tsy miankina al-Dostour ilay mpanao gazety. Voampanga ho namoaka vaovao diso sy nampiasa kamera nomerika sy fakantsary finday tamin'ny fanentanany iadiana amin'ny fampijaliana ihany koa i Monem .
Roa herinandro lasa izay, tamin'ny 16 Aogositra 2007, namoaka lahatsary tena mahavaky fo ahitana an'i Mohamed Mamdouh, ankizy 12 taona izay maty noho ny fampijaliana tao amin'ny tobin'ny polisy ao Al Mansoura izay nitazonana azy noho ny fangalarana fonosana dite tamin'ny fivarotana iray eo an-toerana i Monem.